I-China Bamboo Tableware Abavelisi kunye neFektri, abaXhasi | Gianty
I-Tag Archives: bamboo Tableware
I-Birchwood cutlery ethengisa izinto eziphilayo kwiBallchwood - 100% i-bamboo yendalo eVuswayo eKumbelekayo- iGianty
Isitshixo se-bamboo senziwe nge bamboo yendalo ecocekileyo. I-bamboo zezona zinto zihlaziyiweyo emhlabeni. Kuvunwa kwaye kwenziwa ubuchwephesha ngokuzinzileyo. Beka ugxininiso kulonwabo lwendalo, ukunambitha kunye namava ngokusika i-bamboo cutlery. Ezi cutlery zenziwe ngohlobo oluhle zihlala kakuhle esandleni kwaye zilungelelana ngokugqibeleleyo ngaphakathi kwimbonakalo yepulasitiki engenasiphako. Eyona asethi yokwenene yendawo yesitali, kwiminyhadala yokutya kunye neminyhadala, kwiziza zenkampi nangexesha lokudla kunye namabala egadi. Ayizukusebenzisa kuphela ukutya i-ice-cream, ikhekhe ...
Iimveliso ezenziwe kuMntu othile kwiKorea yoMqhekezi Wokhuni kunye neFolokhwe - I-100 ye-bamboo yendalo eKuphelekayo okusikiweyo yeGreater-Gianty
Iimveliso ezenziwe kuMntu kwi-Antibacterial Bamboo Utensil -Birchwood FSC yendalo eKuphakanyisiweyo enokuCutheka -i-Gianty
Isikhuni somthi senziwe kwi-100% ye-FSC® eqinisekisiweyo yokuhlaziya i-birch. Umthi weBirch uyaziwa ngokuba ngumthombo weenkuni okhula ngokukhawuleza kwaye i-FSC® iqinisekisa ukuba iinkuni zivela kumahlathi alawulwa ngokuzinzileyo. Baqinisekisa ukuba kuwo wonke umthi ogawulweyo, kutyalwa umthi omtsha. I-FSC® iqinisekisa ukuba izilwanyana kunye nezilwanyana ziyakhathalelwa. Ukuchetywa kwenziwa ngeenkuni ezingadityaniswanga ukuze ulindele ukunambitheka okuncinci kwendalo xa uzisebenzisa. Ilungele iipikniki zasehlotyeni, ii-BBQ's kunye nokuhamba. I-Plast cutl ...
Isampulu yasimahla yempahla ekhitshini iM bamboo ekhitshini- iipesenti ezingama-100 zeNqanawa ezihlaziyiweyo zeNdalo eziSetyenzisiweyo zokuGquma -iGianty
Iimveliso eziHambise kakuhle kwi-160 Wooden Tableware - I-100% I-bamboo yendalo eVuselelweyo eyiCutryry -Gianty
Uluhlu lwamaxabiso amaxabiso asezantsi e-Fsc Flatware -Birchwood FSC yendalo eKuphelekayo ngokutsha kweComputer- iGianty
Umgangatho ofanelekileyo weToo Tongs Tongs - 100% I-bamboo yendalo eVuswayo yeCustomer-Gianty
Ixabiso eliphantsi leCompactable Wooden Tableware - IBirchwood FSC yendalo Ukuphinda ibuyeke ukuCutheka - iGianty
Abathengisi abathengisa yonke indawo iSupple yeNdodo yeBlue - iBirchwood FSC yendalo eKuphakanyisiweyo enokuCutheka -i-Gianty
Ixabiso elifanelekileyo I-bamboo Ladle - I-100% I-bamboo yendalo eVuselelweyo ngokuCutheka -i-Gianty
Enye yezona zishushu kakhulu kwi-Bamboo Ice Cream Scoop - iBirchwood FSC yendalo eyiVumkileyo yokuCombulula eKhuselweyo -i-Gianty